अमेरिकामा जुग बित्यो तर बुद्धि फिरेन। Globe Nepal News Portal
अमेरिकामा जुग बित्यो तर बुद्धि फिरेन। अमेरिकामा जुग बसेको भन्नु मात्रै वानी ब्यहोरा चाहि उतैको आँटि कुटि नेपालकै। हुन पनि किन नहोस रु उतै जन्म्यो, उतै हुर्क्यो संस्कार पनि उतैको,ु बर्मा ग​ए कर्म सङ्गै। दुइ नेपाली भेट्यो कि ,शुरु भयो चिन्ता र चासो चाहि अर्कैको। फोनमा बार्तालाप मात्रै के शुरु हुन्छ, शुरु भै हाल्यो उहि गन्थन, जुन गन्थनले अरुको प्राइभेसि ९व्यक्तिगत०, अर्काको बैयक्तिक गोप्यता, बैयक्तिक हिसाबकिताबको बेवास्ता मात्रै होइन खानै छोड्ने, काम मै नजाने, बरु आफ्ना नित्य दैनिकि तोड्ने तर अर्काको चिन्ता गर्न नछाड्ने। अमेरिका पाइला हाले लगत्तै जान्ने बुझ्नेले बुझाइ दिन जरुरि छ, नया मानिसलाइ ,खुरु खुरु आफ्नो चिन्ता गर्ने तर अर्काको चियो चर्चो बन्दै गरिदिने । अर्थात ,अर्काको पर्सनल बिजिनेसमा बढि चासो नदिने।
घर कहाँ पर्यो नेपालमा? के गर्थिस नेपालमा? कहिले आइस​? यत्तिसम्म चाहि ठिकै छ तर सोधनि चाहि यस्तो नहोस कि कहा बस्छस​? को सङ्ग बस्ने? कागज भ​एको कि नाहि? के बाट आएको? कहा काम गर्ने? कति कमाउछेस वा कमाउछस​? घर हो कि एपार्टमेन्ट​? घर कतिमा किनेको? कहिले किनेको? कति जम्मा भा छ बैङ्गमा डलर​? को को छन परिवारमा? के के गर्छन​? कति घण्टा काम गर्छस​? घण्टाको तनाखा कति हो? नेपालमा जग्गा जमिन घर छ कि छैन​? स्वास्नि बालबच्चा, लोग्ने कता छन कि सङ्गै? एपार्टमेण्टको भाडा कति? ब्यबसाय कै कुरा गर्दा फलानाले ब्यबसाय कतिमा बेच्यो? कतिमा किनेछ​? बच्चा जन्मिनेवाला छ कि छैन​? गाडी छ कि छैन​? ड्राइभर लाइसेन्स छ कि छैन​? कस्तो गाडी छ​? कतिवटा गाडी छ​? कस्तो रङ्गको? भान्सामा कस्तो कस्तो पाक्ने गरेको छ​? मासु पाक्छ कि पाक्दैन एपार्टमेण्टमा? जस्ता थुप्रै ब्याक्ति एबम पारिवारिक निजि मामलामा दख्खल दिने, चासो राख्ने, सोधनि गर्ने, चियोचर्चो गर्ने र निजि मामलाका सबालहरु सोधेर हैरान पार्दा रहेछन​।
यस्तो अनाबश्यक ब्याक्तिगत एबम पारिवारिक नितान्त निजि सबालमा चासो राख्नुलाइ अमेरिकामा अर्काको बिजिनेसमा बदर गर्नु भन्ने गरिन्छ​। त्यसैले अमेरिकनहरु यस्ता सबालमा नन अफ योर बिजिनेस​, डन्ट बदर इन माइ बिजिनेस​, डण्ट वरि एवाउट माइ बिजिनेस​, एज लङ्ग एज ईटस नट माइ बिजिनेस, आइ स्टे आउट अफ अदर्स बिजिनेस​, यस्ता शब्द र बाक्यहरुले जबाफ दिने गर्दछन तर नेपालिले चाहि कहिल्लै सिकेनन जहा बसिरहेको छ त्याहाको चालचलन​।
एकातिर अर्काको चासो र चियो गर्दा समयको नास अर्कोतिर दिमाग सिर्जनसिल हुन नसक्ने र मुलत ब्याक्तिगत पर्सानालिटिमा ह्रास आइ सामाजिक ओजन घटन सक्छ​। यसबाट साथित्व​, सामाजिक सम्बन्धहरु चिसिने, अर्काले झिजो मान्ने, अप्ठेरो मान्ने र अर्को पटक देखि यस नेचरका मानिससङ्ग टाढै बस्न खोज्ने हुनसक्दछ​। त्यसैले प्लिज स्टे आउट अफ अदर्स बिजिनेस​, गिभ रेस्पेक्ट एन्ड गेट रेस्पेक्ट एज वेल​। अर्काको चासो र पानि पधेराको गफले समय बर्बाद मात्रै नबनाउँ, ब्ययक्तिक उचाइ पनि उभो लगाउँ।